Motivation for success :: शत प्रतिशत छात्रवृत्तिका लागि राइटपाथ !
शत प्रतिशत छात्रवृत्तिका लागि राइटपाथ !
काठमाडौँ – राइटपाथ करियर काउन्सिलिङले आफ्नो पाँचौँ वार्षिकोत्सवको अवसरकार केही विद्यार्थीलाई शत प्रतिशत छात्रवृत्ति दिने भएको छ । राइटपाथले विदेश अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीका लागि दुई नयाँ अफरहरूको घोषणा गर्दै केहीलाई शत प्रतिशत छात्रवृत्ति दिने भएको हो
विद्यार्थीले आइएलटिएस गर्दा शत प्रतिशतसम्म छात्रवृत्ति पाउनेछन्। यो अफर १ हप्ताका लागि मान्य हुनेछ। त्यस्तै, दोस्रो अफरमा पहिलो आउने १०० विद्यार्थीहरू मध्येबाट २५ जनालाई शत प्रतिशत निःशुल्क भाषा कक्षा तयारी, ३५ जनालाई ७५ प्रतिशत छुटमा र ४० जनालाई ५० प्रतिशत छुटमा भाषा कक्षा तयारी गराउने घोषणा गरिएको छ।
राइटपाथले माथिका अफर प्राप्त गर्नका लागि केही सर्तहरु राखेको छ । पहिलो अफर लिनका लागि विद्यार्थीले राइटनाथको अफिसियल फेसबुक पेज लाइक गर्नुपर्ने छ । पेजमा रहेको अफरको पोस्टलाई सेयर गरेर तिनजना साथीहरूलाई ट्याग गर्नपर्ने छ ।
कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै राइटपाथका सीइओ फिलिप डिसीले विद्यार्थीको सहजताका लागि अफरहरु ल्याएको बताए । गुणस्तरीय शिक्षाका लागि उचित परामर्श भन्ने नारासहित स्थापित संस्थाले आजसम्म आफ्नो उद्देश्य अनुसारकै काम गरेको भन्दै त्यसका विद्यार्थीको ठूलो साथ रहेको बताए ।
आफ्ना सबै शाखाहरूलाई यो सफलताको श्रेय दिँदै उनले भने, ‘राइटपाथ यो ठाउँ सम्म आइपुग्नुमा म अगाडी देखिए पनि मेरा लगनशील र मेहनती कर्मचारीहरूको ठुलो भूमिका छ। त्यस्तै देशका विभिन्न भागमा रहेका शाखाहरूको अथक प्रयासका कारण हामी यो स्थानमा आइपुगेका हौँ। आजसम्म धेरै नेपाली विद्यार्थीलाई उनीहरूको रोजाइको गन्तव्य पुर्‍याइरहँदा अभिभावक र विद्यार्थीले हामीलाई देखाउनुभएको विश्वास र माया प्रति म आभारी छु ।’
कोभिडको चुनौतीमा पनि निरन्तर काम गरेको भन्दै उनले आफूहरू सामान्य अवस्थामा फर्किन प्रयासरत रहेको पनि बताए । वार्षिकोत्सवको अवसरमा राइटपाथले विद्यार्थीका लागि घोषणा गरेको विशेष अफर बारे फेसबुक पेजबाट जानकारी लिएर अधिकतम लाभ उठाउन पनि उनले आग्रह गरे।
त्यस्तै, राइटपाथकि ब्रान्ड एम्बेस्डर तथा नायिका पूजा शर्माले छैटौँ वर्ष प्रवेश गरेकोमा राइटपाथलाई बधाई दिँदै अझै धेरै वार्षिकोत्सव मनाउने चाहना रहेको बताइन् । जस्तोसुकै कठिन परिस्थितिमा पनि राइटपाथ नरोकिएको स्मरण गर्दै आगामी वार्षिकोत्सवहरू अझै भव्य तरिकाले मनाइने बताइन्।